Amitaabh Malhotra's Articles on Martech Zone |
Zvinyorwa na Amitaabh Malhotra
Amitaabh Malhotra ndiye mukuru wezvekutengesa we Omnyway, yakasangana chikuva chekubhadhara, kuvimbika mibairo uye zvinopa zvinokurudzira vatengi kushandisa yavo nhare mbozha kune ese mativi erwendo rwekutenga.
Sei Vatengesi Vanogona Kudzivirira Kurasikirwa Kubva Ku Showrooming
Chitatu, July 19, 2017 Amitaabh Malhotra
Famba uchidzika nemugwagwa wechero chitinha-uye-dhaka chitoro uye mikana iripo, iwe uchaona mushopper nemaziso avo akakiyiwa pafoni yavo. Ivo vanogona kunge vachifananidza mitengo paAmazon, vachikumbira shamwari kurudziro, kana kutarisa kumusoro ruzivo nezve chimwe chigadzirwa, asi hapana mubvunzo kuti nhare mbozha dzave chikamu cheicho chiitiko chekutengesa. Muchokwadi, vanopfuura makumi mapfumbamwe muzana vevatengi vanoshandisa mafoni vachitenga. Iko kusimuka kwe mobile